Anaty ady amin’ny valanaretina, ‘tonga izao ny fotoana’ · Global Voices teny Malagasy
Trinidadiàna iray poeta misaina izay fomba hahatafavoaka velona amin'ireo fepetran'ny COVID-19
Voadika ny 05 Mey 2021 10:01 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, عربي, Français, English
Voninkazo lantana mamelana ary maka ny endriky ny viriosy COVID-19 . Sary an'i Jim & Robin Kunze tao amin'ny Flickr, CC BY-NC 2.0.
Fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: Manoloana ny fitomboan‘ny tahan‘ny valanaretina COVID-19 ao Trinidad & Tobago, dia nampiditra andiana fepetra vitsivitsy ny governemanta tamin'ny 29 Aprily, isan'izany ny fanakatonana ireo toerana fisakafoanana, fanaovana fanatanjahantena, ary toerana fivavahana, ary ny fampidinana—hatramin'ny 25 isanjato ny fahafahana—ny tetezana an-dranomasina sy ny sidina an'habakabaka eo anelanelan'ireo nosy roa.
Tamin'ny 3 May, vao mainka nihamafy kokoa ireny fepetra ireny taorian'ny nanambaran'i Dr. Maryam Abdool-Richards, Lehiben'ny mpitsabo, fa mipetraka “eo amoron-tevana” ny firenena, miaraka amin'ny hoe ao anatin'ny roa herinandro dia mety ho tratra ny fetra farany zakan'ny rafitra natao ho an'ny fahasalamàna raha toa tsy mitsahatra ny fitomboan'ny tahan'ny fidiran'ny aretina amin'izao fotoana izao, anisan'izany ny isan'ireo marary mila mahazo fikarakaràna maika be na mila ireo sampana fikarakaràna manokana.
Nanome fampieritreretana marobe ilay Trinidadiàna poeta, Shivanee Ramlochan, mba hanehoana ny fomba azon'ny olona hitrandrahana lavitra sy hikarohana làlana hiatrehana izany ao anatin'ity raharaha manga ity. Misy dika nokiraina avy amin'ny tantara nosoratany averina avoaka etsy ambany.